အဆိုပါ HARD DISK ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံ - HARD DISK ကို - 2019
တစ်ဦး hard disk ကို၏ယုတ္တိဖွဲ့စည်းပုံမှာ
အတွက်ဖြန့်ချိသည့်စနစ်၏ခြယ်လှယ်, "ကို Safe Mode ကို", အလုပျအတှကျက၎င်း၏စွမ်းရည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာအများအပြားဖယ်ရှားပစ်နိုင်သလားအဖြစ်အချို့သောအခြားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်။ သို့သျောလညျးဒီလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်မသန်စွမ်းန်ဆောင်မှုများ၏နံပါတ်, ယာဉ်မောင်းနှင့်အခြား Windows components များအသုံးပြုသောအခါအဖြစ်, full-featured ကိုခေါ်မရပါ။ ဤကိစ်စတှငျ troubleshooting သို့မဟုတ်အခြားတာဝန်များကိုပြီးနောက်မေးခွန်းထဲက "ကို Safe Mode ကို"။ ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးယူ၏ algorithms အမျိုးမျိုးသုံးပြီးဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: windose7ရက်နေ့တွင် "ကို Safe Mode ကို" ဖွင့်ပေးခြင်း
သည် "safe mode" ၏ထွက် Options ကို
နည်းလမ်းများထွက်ပေါက် "ကို Safe Mode ကို" သို့မဟုတ် "ကို Safe Mode ကို" တိုက်ရိုက်က activated ခဲ့သည့်အတွက်ထုံးစံပေါ်မူတည်သည်။ ယင်းနောက်ကြှနျုပျတို့သညျဤကိစ္စနှင့်အတူအသေးစိတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအရေးယူဘို့ Options အားလုံးကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ
အများဆုံးကိစ္စများတွင်လုံလောက်စွာကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါရန်စမ်းသပ်မှု mode ကိုကနေမှထွက်ရန်။ ဒီ option ကသင် activated ဘူးသောအဖြစ်အပျက်အတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် "ကို Safe Mode ကို" ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းအတွက် - keystroke မှတဆင့် F8 ဒီရည်ရွယ်ချက်, အပိုဆောင်း tools များအတွက်အသုံးပြုလျက်နှင့်မ - သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ start အခါ။
ဒါကြောင့်မီနူးအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start"။ ထို့နောက်ကမ္ပည်း၏ညာဘက်အပေါ်တြိဂံအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Down Shut"။ ရှေးခယျြ "ပြန်လည်စတင်ပါ".
ထို့နောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်လည်စတင်ရန်ကွန်ပျူတာကိုစတင်ပါ။ ဒါကြောင့်စဉ်အတွင်းသင်တို့သည်နောက်တဖန်ပြုမူကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဘုံဘိုင်သော့အောင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါကွန်ပျူတာသာမန် mode မှာ Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်သင့်ရဲ့ PC ကိုတစ်ခုထက် ပို. အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်သည့်အခါထိုကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါသင်သည်ထိုသင်အမြဲစံ startup ကိုပြုသဖြင့်ကဲ့သို့တူညီသောအရာပြီးမြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကို select တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုဒ်စကားရပ်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း 2: "စစ်ဌာနချုပ်လိုင်း"
အထက်ပါနည်းလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆိုပါကအများဆုံးဖွယ်ရှိ, သင်၌ device ကိုပစ်လွှတ် activated ကြသည်ဟုဆိုလိုသည် "ကို Safe Mode ကို" က default ။ တဆင့်ပြီးမြောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက "Prompt ကိုဆင့်ဆို" သို့မဟုတ်သုံးပြီး "စနစ် configuration" ကို။ ဖြစ်ပေါ်ပထမဦးဆုံးအခွအေနေအဘို့စတင်လေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျး၌တည်၏။
စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့်ဖွင့်လှစ် "All Programs".
အခုတော့အမည်ရှိ directory ကိုသို့သွား "စံ".
တွေ့သည်အရာဝတ္ထု "Prompt ကိုဆင့်ဆို"ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ရာထူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Run".
အောက်ပါမောင်းထုတ်ရန်လိုအပ်သောအရာ activated shell ကို:
bcdedit / set ကို default bootmenupolicy
ကွန်ပျူတာကိုပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်း reboot ။ OS ကိုစံလမ်းအတွက် run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: Windows7မှာ "Prompt ကိုဆင့်ဆို" Activate
Method ကို 3: "System Configuration"
သင် activation သတ်မှတ်ထားလျှင်အောက်ပါနည်းလမ်းသည်အမှု၌သင့်လျော်သည် "ကို Safe Mode ကို" မှတဆင့် default "စနစ် configuration" ကို.
စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့် go "Control Panel ထဲက".
ကလစ်နှိပ် Now ကို "အုပ်ချုပ်ရေး".
ပစ္စည်းများ၏စာရင်းမှာတော့စာနယ်ဇင်း "System Configuration".
အဆိုပါပစ်လွှတ်နောက်ထပ်ဗားရှင်းရှိပါတယ် "System Configuration"။ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဦးဝင်း + R ကို။ ရလဒ် window ထဲတွင်အမျိုးအစား:
အဆိုပါ shell ကို tool ကို activated ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်းရွှေ့ရန် "Loading".
activation အကယ်. "ကို Safe Mode ကို" ကို default shell ကိုမှတဆင့်ထူထောင်ထားပြီး "System Configuration"ထိုအခါများတွင် "Boot ကိုန့်သတ်ချက်များ" ပစ္စည်းဆန့်ကျင် "ကို Safe Mode ကို" သတ်မှတ်ထားခံရဖို့အလံ။
တံဆိပ်လက်မှတ်ကို Remove, ပြီးတော့နှိပ် "Apply" နှင့် "အိုကေ".
ဒါက window ကိုဖွင့်လှစ် "System Configuration"။ ဒါဟာ device ကို OS ကို restart လုပ်ပါရန်သင့်အားပြ။ ကလစ်နှိပ်ပါ "ပြန်လည်စတင်ပါ".
PC ကို restart ချလိုက်ပါနှင့်ပြီးသားပုံမှန်လည်ပတ် mode မှာထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 4: ကွန်ပျူတာစဉ် mode ကို Select လုပ်ပါ
ကွန်ပျူတာ loading သည်အဘယ်မှာရှိအခြေအနေများလည်းရှိပါတယ် "ကို Safe Mode ကို" ပုံမှန်အားဖြင့်ပေမယ့်အသုံးပြုသူခါတိုင်းလိုအဖြစ်ကို PC ပေါ်မှာတစ်ကြိမ်တည်း switch ကိုလိုအပ်သည်။ ဤသည်မရှိသလောက်ဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်နေဆဲတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, အကယ်. စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတူပြဿနာနေဆဲလုံးဝဖြေရှင်းမပေးပေမယ့်သုံးစွဲသူတစ်ဦးစံလမ်းအတွက်ကွန်ပျူတာကို run စမ်းသပ်ဖို့လိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, က default အနေနဲ့ Boot တက်အမျိုးအစားကို reinstall လုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်, သင်သည် operating system ကိုစတင်တွင်တိုက်ရိုက်လိုချင်သော option ကိုရွေးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ "ကို Safe Mode ကို"ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း နည်းလမ်း 1။ , BIOS ဘီးပ်အသံသက်ဝင်ပြီးနောက်။ အဖြစ်မကြာမီအသံထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်အဖြစ်, သင်တို့အပေါ်မှာအနည်းငယ်ဘုံဘိုင်လုပ်ဆောင်ရမယ် F8။ ရှားပါးကိစ္စများတွင်အချို့သော Device များအခြားသောလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်လက်ပ်တော့တစ်အရေအတွက်ပေါင်းစပ်ဖို့လျှောက်ထားရပါမည် Fn + F8.
စနစ်က startup ၏အမျိုးအစားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကစာရင်းဖြစ်သည်။ မြှားကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် "Down" မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကီးဘုတ်ပေါ် "ဒီပုံမှန်အတိုင်း Windows ကိုတင်".
အဆိုပါကွန်ပျူတာစစ်ဆင်ရေး၏ပုံမှန် mode မှာစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဘာမျှမပြုလျှင်မူကားပြီးသားကိုနောက်က start မှာသည်, operating system ကိုနောက်တဖန် activated ဖြစ်ပါတယ် "ကို Safe Mode ကို".
ယင်းမှထွက်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် "ကို Safe Mode ကို"။ အထက်ပါအသီးအနှံ output ကိုနှစျယောကျတကမ္ဘာလုံး, ထို default settings ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးကျနော်တို့မူကွဲတစ်ခုသာတဦးတည်းအချိန် output ကိုထုတ်လုပ်လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဲဒီမှာအသုံးပြုသူအများစုအသုံးပြုရသောသာမန်စတင်မှုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသာလျှင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် "ကို Safe Mode ကို" ကို default ဒေါင်းလုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့် algorithm ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါထို့ကြောင့်သင်က activated ခံခဲ့ရပုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ် "ကို Safe Mode ကို"သင် startup type ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုခငျြတဦးတည်းအချိန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်။
ဗီဒီယို Watch: Behind-the-Scenes at the Bachelor in Paradise Resort (သြဂုတ်လ 2019).